(Last Nohavaozina: 06/03/2020)
Noho izany dia efa nanao izany farany. Ianao nataony tao for ny vakansy any am-piasana, Nividy tapakila ny fiaramanidina ka nitodi-doha ho an'i Hongria ho tsara mendrika fety. Ary raha izay no Raharaha tsara ihany no tsara – sady koa anie, Budapest dia tanàna tsara tarehy – aza amidy ny tenanao ihany no fohy amin'ny alalan'ny mifikitra manodidina ny renivohitra. Eoropa dia tsara fifandraisana amin'ny kaontinanta an'arivony safidy ho an'ny fiaran-dalamby mandeha, ary izany dia ahitana ny Hongria. Koa ianao indray mandeha nahita ny Szechenyi mafana Baths ary tiany ny pint amin'ny Beer Spa, mitodi-doha amin'ny tanàna ao amin'ny anankiray amin'ireo 3 andro tsara indrindra Budapest fitsangatsanganana lamasinina.
Ny Fiangonana ao amin'ny Debrecen Lehibe ny tanàna ny teboka ifantohany, sy ny anjara asa maha-famantarana ny Protestanta any Hongria. Misy ihany koa ny tranombakoka maro ho anao hitsidika, toy ny Deri Museum, which houses some of the most historic pieces in all of Hungary.
Aza adino ny hanandrana avy ny sasany amin'ireo sakafo an-toerana sy ny divay, ihany koa. Raha toa ianao tena sommelier, you may opt for “Bikaver”, a locally produced wine that translates to “bull’s blood”. Izany dia midika hoe novokarina tany Hongria, in the famous ‘Valley of Beautiful Women’ faritra. Yum!
Raha toa ianao mpankafy ny mafana fandroana, Debrecen koa dia efa anao voasarona. Ao amin'ny fomban-drazana lasa avy, the Aquaticum Spa is more like an indoor rano park. Manasongadina avo domed valin-drihana sy ny loko rano tsary, these thermal baths are fun for the whole family.
Fantatra ho toy ny foiben'ny ny kolontsaina sy ny zavakanto, it also sports a thriving coffee scene and you’ll find hundreds of cafes along its winding streets.Vienna an-trano ihany koa ny Schonbrunn, the summer residence of the Hapsburgs and one of many grand buildings throughout the city.
Farany, dia efa tonga ny farany teny, ny tapaky ny tanàna salantsalany faritra atsimon'i Vienne. Eny, marina izany, dia efa nanampy Aotrisy iray hafa andro nankany lisitra ity. Nahoana ny fa? Tsara satria Wiener Neustadt (ankoatra ny manana mahatsikaiky anarana), dia feno olona tao Jerosalema tanàna efa ho 50,000 olona, and it’s got it all in terms of things to do.
Any 30km monja avy any Vienne sy tena akaikin'ny sisin-tanin'i Aotrisy Hongroà-dia ny tonga lafatra ny andro Budapest fitsangatsanganana lamasinina, ity tanàna ity ny tantara Mihabetsaka amin'ny ady ho an'ny fanaraha-maso avy amin'ny fanjakana isan-karazany. Na dia eo aza ireo ady- na angamba noho ny aminy – Wiener Neustadt evolved into an important military training ground with the construction of the Maria Theresa Military Academy in the 1700s.
Mandao ny lasa ho any aoriana, amin'izao fotoana izao dia an-trano Wiener Neustadt ny hetsika isan-karazany maro, anisan'izany ny tongotra lavitra be ny ivelan'ny trano sy ny valan-javaboary. Azonao atao ny mitsidika Myra Falls ho an'ny sasany mahafinaritra tongotra lavitra, na ny loha tsy mahazo manao Gesaeuse National Park to take in the fresh air.
Amin'ny ankapobeny lafo sy feno trano taloha, fanta-kianja niaro Moyen Âge, sy izao tontolo izao ny tranainy indrindra fandidiana Takelaka Momba ny Kintana Clock, Prague dia tsy maintsy atao amin'ny-vakansy Eoropa. Raiso mora eto ary finaritra Nitsangantsangana manerana ny Charles Bridge, vita tamin'ny 1402. Na tsara kokoa, put on your finest royal uniform and head to Vysehrad for the day to check out the ancient ruins of the former castle.
Do you want to embed our blog post “3 Best Budapest Day Trips By Train” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/best-budapest-day-trips-train/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Soisa Fiaran-Dalamby Manana Ny Fampisehoana Tsara Indrindra Amin'ny Rehetra Eoropa
Train Tsidika, Train Travel Soisa, Travel Europe
Train Travel Frantsa, Train Travel Alemaina, Train Travel Espaina, Train Travel Soisa, Train Travel The Netherlands, Travel Europe